New Jersey Action Water Park Overview sy Photos
Etazonia New Jersey
Valan-drano ao Vernon, New Jersey
Amin'ny ankabeazan'ny toeram-ponenan'ny rano dia mila miasa ianao mba hahafinaritra anao: Ny fiakarana ny sary dia midika hoe miakatra tohatra. Ny Park-nao dia tsy toerana marobe indrindra amin'ny valan-drano ... fa mbola mila miara-miasa amin'ny fialambolinao ianao. Nipetrapetraka teny an-tampon'ny tendrombohitra iray, ny fidirana amin'ny vavahadin-jaridainan'ny valan-javaboary ary ny tohatra mankany amin'ny trano fisakafoanana dia midika fa ny fiakarana lalan-dàlana. Ny ankamaroan'ny fiara dia mampiasa ny topografia voajanahary an-tendrombohitra ary tsy mitsangana ambonin'ny tany na mitaky tilikambo mitaiza.
Ary manafosafo tokoa! Na ny fiara fitaterana "family" ao amin'ny valan-javamaniry aza dia toa natao ho an'ny fianakavian'ireo mpikomy tia kiraro.
Misokatra ny zaridaina amin'ny fiandohan'ny volana Jona hatramin'ny fiandohan'ny Septambra. Andramo miaraka amin'ny Park Action for andro sy ora tsy tapaka.
Toerana sy torolalana:
Ny adiresy ara-batana dia 200 Route 94 ao Vernon, New Jersey. Ho an'ny GPS, ampiasao ny adiresy, 200 McAfee Vernon Road, Vernon, NJ. Any avaratr'i New Jersey, eo amin'ny adiny iray avy any New York City.
Manomboka ny NYC, alao ny Tunnel Holland (14th St.) mankany amin'ny NJ-139 W. Mialà amin'ny US 1-9 N mankany amin'ny RT-3 W amin'ny fiarandalamby mankany New Jersey Turnpike / Rt. 495 amin'ny NJ-3 W. Alao ny US-46 W mankany NJ-23 mankany Wayne. Eo amin'ny CR-515 / Stockholm Vernon Rd., Dia navela teo amin'ny NJ-94 / McAfee Vernon Rd. to park.
Fitsipika momba ny fidirana:
Ny vidin-tsakafo ho an'ny ankizy (latsaky ny 48 taona) sy ny zokiny (65+) .Fivezivezena ny vidin'ny vahiny tonga ora 3 alohan'ny famaranana. Tranokala.
Read about Sanctuary of Black Creek in Action Park .
Ampitahao ny sora-baventy momba ny Sanctuary Black Creek amin'ny TripAdvisor.
Jereo ny Valan-drano:
Photo Tour of Parc ction
Ny karazan-drivotry ny rano isan-karazany, anisan'izany ny fiaramanidina haingana, ny diany, ny lakandranon'ny fiaramanidina, ary ny fahitana iray miavaka sy ny dobo filomanosana, hetsika marobe ho an'ny ankizy madinika sy ny faritra misy rano miditra.
Fijerena fiaramanidina fanoherana mahery vaika.
New ao amin'ny Park:
Ho an'ny 2009, nampidirin'ny valan-javaboary Alpine Pipeline, izay misy tsato-kazo boribory roa.
Fijerin'ny Park Water
"Miverina ny hetsika." Izany dia manambara ny doka ho an'ny Action Park. Ny hevi-diso dia manana dikany roa. Maro amin'ireo fiara fitaterana ao amin'ny vala no tena mahery setra ary manome mihoatra noho ny asa goavana. Saingy ny teny filamatra ihany koa dia manondro ny niavian'ny valan-javaboary.
Rehefa nosokafana tamin'ny taona 1976, dia nantsoina hoe Park ilay Action vaovao. Manodidina ny vanim-potoana tahaka ny Pioneer River Country ao amin'ny Walt Disney World sy ny Orlando's Wet 'Wild , Park Action dia iray amin'ireo zana-toeram-pialantsasatry ny indostrian'ny indostria. Misy valan-javaboary an-jatony maro eran-tany, ny indostria dia efa matotra. Ny ankamaroan'ny valan-tseranana ankehitriny dia mamela ny fiaramanidina avy amin'ny mpanamboatra vitsy an'isa ary mazàna no maka tahaka ny mofomamy cookie-cutter. Saingy tsy nisy ny prototype, ny mpilatsaka an-tsoratry ny Action Park dia tsy maintsy nanao azy io rehefa nandeha izy ireo.
Izany dia nitarika ny zava-doza mahatsiravina rehefa nisy andian-jiolahy nitranga tany amin'ny zaridaina tamin'ny taona 1980. Tsy mahagaga àry raha nanova ny anaran'ny toeram-panorenana ny tompony vaovao tamin'ny 1998 ka hatramin'ny Mountain Creek. Saingy niaina ny tantara, ary na dia teo aza ny zava-doza teo aloha dia namerina ny anarana hoe Park Park ny taona 2014.
Ny fiara fitaterana malaza indrindra dia efa ela, saingy mitoetra hatrany ny akora amin'ny zaridaina miavaka.
Raha tokony hampiakatra ny tilikambo manondraka ny tany ny tilikambo, ny ankamaroan'ny fiara dia mampiasa ny toerana misy ny tendrombohitra. Midika izany fa mila mandehandeha sy manambony ianao, rehefa mandehandeha manodidina ilay toeram-pitsangatsanganana. Midika ihany koa fa tsy misy na iray na ny hafainganam-pandeha hafa hita maso amin'ny mpitondra fiara eo amin'ny lalana 94. Raha ny marina, miaraka amin'ireo marika kely sy ny mombamomba azy ambany, ireo izay mandalo dia mety tsy mahafantatra akory ny valan-javaboary raha tsy mitady azy io.
Jereo ny moguls
Indraindray ao anaty valan-javaboary, mety ho manjavozavo ny fiezahana hitady ny fiara. Noho ny fampiasan'izy ireo ny mombamomba ny tendrombohitra, maro amin'ireo sary mihotakotaka eny an-dalambe, mitsambikimbikina ary mifampidinika, ary raha tsy izany dia mijanona amin'ny lalaon'ny valan-javaboary. Fomba iray azo antoka hitadiavana ny fiara: araho ny antsoantso.
Ny fiara tsy manam-paharoa nataon'ny Park Park, indrindra ireo zokiolona, ​​dia sarotra be.
Ohatra, ny Reniranon'i Colorado, izay milazalaza ny valan-javaboary fa tsara fitondran-tena amin'ny famolavolan'ny fianakaviana, dia mandevona am-pitiavana. Ny mpikambana ao amin'ny fianakaviana dia mila mifantoka amin'ny fiainany malalaka satria mitombo haingana ny haavon'ny renirano ary manangona haingana ny fiarandalamby manangona ao anaty tratra. Toy ny hoe tsy dia mendri-piderana loatra izy ireo, amin'ny fotoana iray dia miditra amin'ny lava-bato toy ny fiakaran'ny hazavana ny basy. Tsy mitaraina aho, eritrereto hoe ianao. Ny fahatsapana dia ny Grail Masina ho an'ny mpankafy marobe, izay tafiditra ao anatin'izany. Saingy ny valanjavabato mena an'ny Colorado River, ny ambaratonga faharoa avo indrindra amin'ny valan-javaboary, mifamatotra amin'ny famaritana azy amin'ny maha-fianakaviana dia mamitaka. Toa sahala amin'ny hoe toy ny fantson-drano izay efa nosedraiko hatramin'izay.
Ny tsy fahampiana, ny fanandramana tsy misy fanaraha-maso dia betsaka ao amin'ny Action Park. Ny baomba fohy ataon'ny baomba dia mamarana tampoka ary mandefa fanahy matanjaka izay afaka mandeha 15 metatra eo ho eo. Ny Cliff Canyon mifanila aminy no mamafa ilay sary; Ny rivodoza fotsiny dia mitsambikina avy eo amin'ny sisiny ho an'ny tongotra 20 metatra ao anaty rano. Na i Cannon Ball Falls aza, dia misy fiaramanidina mivezivezy eo am-pandehanana, mivoatra haingana (eo amin'ny faritra iray mikorontana indrindra any an-tendrombohitra) izy ireo ary maka mpitaingina mirefy fito metatra eo ho eo amin'ny dobo misy rano, sary -Ny karazam-barotra, dia manjavona ny herin'ny maizina aloha izy ireo alohan'ny handosiran-drongony.
Afaka mahazo tebiteby be ianao
Ny mahasamihafa hafa dia ny Anxiety High , fialam-boly mahafinaritra sy malaza. Ao amin'ny faha-99 feet, ny H2-Oh-No dia anisan'ireo rano maloto indrindra sy haingana indrindra . Any amin'ny tendrony avo indrindra manerana ny tendrombohitra, ny vista dia manampy amin'ny fientanentanana ary manome fomba fijery mahavariana. Ny mpitaingina ny Tarzan Swings dia mampiasa trapeze (miala tsiny, tsy misy voaloboka) mba hivezivezy eo ambonin'ny dobo iray. Ny sasany dia mamela ny trapeze amin'ny haavon'ny biriky ary maimaim-poana ny fiaramanidina. Ny hafa dia manenjika ary avela ho eny ambonin'ny rano fotsiny ho an'ny endrika tsy misy saina iray-aloha plop.
Ankoatra ny sata maha-iray amin'ny zaridainan-drano tranainy indrindra, ny Park Action Park dia anisan'ny lehibe indrindra. Miisa 24 eo ho eo mavitrika eo amin'ny 36 hektara, dia misy fahatsapana ny fahitana satria ny vahiny dia miondrika amin'ny sary iray hafa nafenina tao amin'ny toerana toy ny ala. Ary raha mbola mavesatra tokoa ny valan-javaboary, dia maro ireo fiara fitaterana ho an'ireo mpikomy mahafinaritra tsy dia mahazatra loatra. Ny Hightide Wavepool dia tena goavana ary afaka manangona fialambolin'ny mpitaingina mikaroka ny seranam-piaramanidina na ny hafanana hafanana. Ny zaza madinika dia manana renirano kely malemy (mahagaga, Tsy misy renirano kamo ho an'ny big'uns - Akanin-java-maniry eo amin'ny manodidina ny rano hafa rehetra) sy ny maro hafa.
Misy karazan-tsakafo maro sy sakafo isan-karazany mendri-kaja, fa ny vidiny dia somary mitombo. Ny zaridaina dia tsy mamela ny vahiny entina hanina, fa mamela azy ireo hanosotra ny rano tavoahanginy. Asandrato izy eo am-bavahady.
Aiza no handehanan'i Pumpkin Picking sy Apple Picking any New Jersey
Mamelatra sy mamerina ao amin'ireo jirofo sy saka-jirofo ao North Jersey
Ireo mpividy kafe any avaratr'i NJ dia mamela anao hamadika an'i Starbucks
Fa maninona no ho tia an'i Nitro ianao, ilay sifitifitra enina Lehibe Hypercoaster Adventure
Ahoana no fomba anaovan'i Kingda Ka: Mametaka ny rafitra fanombohan'ny Coaster
Aiza no hialana amin'ny Universal CityWalk
Ny Watergate Hotel any Washington DC
Mankalaza ny fieboeboana Gay ao Phoenix
Inona no tokony hatao amin'ny faran'ny herinandro ao Milwaukee?
Top Martinique Restaurants
4 amin'ireo Park RV tsara indrindra any East Mexico
Mumbai Goa Bus Tickets: Aiza no Misy Boky Tsara Indrindra Online
Mitady asa any Gresy amin'ny fahavaratra
Inona no tokony hataon'ny TSA raha misy zavatra voarara ao anaty kitapo mitondra anao
Luxor Hotel Casino - sary
Ao anatin'ny hotely Shiv Niwas Palace ao Udaipur
Ny Sangrantino Wine Road any Umbria
NYC's 5 Outdoor Swimming Pools